Dowlada dhexe ee Soomaaliya oo lagu leeyahay 8 bilood oo mushaar ah – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaDowlada dhexe ee Soomaaliya oo lagu leeyahay 8 bilood oo mushaar ah
Hiiraan Xog, Oct 11, 2017:- Shaqaalaha Dowladda federaalka ah, Ciidan iyo rayidba waxaa ay dowladda federaalka ah ku leeyihiin mushaar 8 bil ah, sidaasi waxaa lagu ogaaday baaritaan ay sameysay Goobjoog News.
Mid ka mid ah shaqaalaha dowladda federaalka ah oo la hadashay Goobjoog News waxay sheegtay in sanadkii hore oo ay shaqaale ka aheyd mid ka mid ah wasaaradaha dowladda, iyada oo dowladda ku tabeysa mushaar 6 bil ah, hadda oo ay Xildhibaan federaalka ah tahayna aaney mushaar qaadan 2-dii bil ee dambeysay, isku dar lacagta ka maqan 8daas bil, waxaa ay ku sheegtay 10 Kun oo Dollar!
Xildhibaan kale oo golaha shacabka ka tirsan waxaa uu isna sheegayaa in hadda aaney 2 bil qaadan mushaar, sidoo kale uu dowladda ka sugayo mushaarka 6 bil oo sanadkii hore ah, Xildhibaankan waxaa uu ku jiraa weli baarlamaankan 10aad laakin waxaa jira Xildhibaanno aan soo noqon balse ka tirsanaa baarlamaankii 9aad, kuwaas oo iyaguna Goobjoog News u sheegay in ay dowladda weli ka heysato mushaarka 6 bil.
Waxaa xusid mudan in shaqaalaha cusub ee dowladda federaalka ah qaadatay wixii ka dambeeyay doorashada madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo aaney weli qaadan wax mushaar ah, qaarkood waxaa ay Goobjoog News u sheegeen in aaney jirin rajo ka sokeysa Janaayo 2018-ka.
Hadaba, Dowladda federaalka ah ma bixin kartaa qarashkan iyo mushaaraadka intaasi la eg, waxaan arrinkaasi su’aal ka weydiiney Dhaqaale-yahan Bashiir Cabdi Xabeeb isaga oo ku jawaabay“Dowladda dakhligeeda oo iska yar, dakhliga gudaha, nidaamka canshuuraha oo system fiican u shaqeyn, tusaale ahaan canshuurihii berriga oo aan dalka si fiican ugu howl-gelin iyo dowladda aan jirin dakhli kale oo gudaha ka soo gala awgeed, waa adkaaneysaa in dowladda jeebkeeda wax ka bixiso”.
AKHRISO:- Go’anada laga soo saaray shirkii ka socday magaalada Kismaayo